Khipha ku-internet KaiBiLi COVID-19 IgG / IgM Ukukhiqiza nefektri | UGenesise
IKaiBiLiTM I-COVID-19 IgG / IgM Rapid Test Device i-lateral flow chromatographic immunoassay yokutholwa kwekhwalithi ye-IgG ne-IgM antibodies kuya ku-2019-Novel Coronavirus egazini eliphelele lomuntu, le-serum noma le-plasma.
IKaiBiLiTM I-COVID-19 IgG / IgM Rapid Test Device i-lateral flow chromatographic immunoassay yokutholwa kwekhwalithi ye-IgG ne-IgM antibodies kuya ku-2019- Novel Coronavirus egazini lonke lomuntu, i-serum noma i-plasma specimen. Isetshenziswa kuphela njengenkomba yokuthola eyengeziwe yamacala amasha asolwayo wokutholwa okungalungile kwe-coronavirus nucleic acid noma ngokuhlangana nokutholwa kwe-nucleic acid ekutholeni amacala asolwayo. Ayikwazi ukusetshenziswa njengesisekelo sokuxilongwa nokukhishwa kwe-pneumonitis etheleleke nge-2019-nCoV ukutheleleka. Akufanelekile ukuhlolwa kwabantu abaningi.
Noma yisiphi isifanekiso esisebenza nge-COVID-19 IgG / IgM Rapid Test Device kufanele siqinisekiswe ngezinye izindlela zokuhlola kanye nokutholakele komtholampilo. Umphumela omuhle wokuhlolwa udinga ukuqinisekiswa okwengeziwe. Imiphumela emibi ayikuvimbeli ukutheleleka okunamandla kwe-2019-nCoV. Uma kusolwa ukutheleleka okunamandla, ukuhlolwa okuqondile kwe-antigen ye-COVID-19 kuyadingeka. Imiphumela emihle yamanga ye-COVID-19 IgG / IgM Test Rapid ingenzeka ngenxa yokuphinda-kusebenze kusuka kuma-antibodies asekhona noma ezinye izimbangela. Ngenxa yobungozi bemiphumela emihle engamanga, ukuqinisekiswa kwemiphumela emihle kufanele kubhekwe kusetshenziswa ukuhlolwa kwesibili, okuhlukile kwe-IgG noma kwe-IgM.
Idivayisi Yokuhlola Esheshayo ye-COVID-19 IgG / IgM (Igazi Lonke/I-Serum/I-Plasma) i-qualitative lateral flow immune test ye-immunechromatographic yokuthola i- IAma-antibodies e-gG ne-IgM kuya ku-2019-nCoV egazini eliphelele, le-serum noma le-plasma.
Isivivinyo sisebenzisa i-anti-human IgM antibody (umugqa wokuhlola i-IgM), i-anti-human IgG (umugqa wokuhlola i-IgG) kanye ne-anti-rabbit IgG (umugqa wokulawula C) okhubazeke emgqeni we-nitrocellulose.
Ukuzwela Okuhlobene: 98.28%
Imininingwane Ehlobene: 97.01%
Ukuzwela Okuhlobene: 82.76%
Imininingwane Ehlobene: 98.51%
Funda imiphumela ngemizuzu engu-15 futhi ungadluli imizuzu engama-30.
Izimo zokugcina izinto
Amadivayisi wokuhlola we-COVID-19 antigen
KaiBiLiTM I-COVID-19 IgG / IgM
Langaphambilini IKaiBiLi COVID-19 Antigen -saliva swab
Olandelayo: IKai KaBiLi Saliva Collection Kit (Eyomile)
Antigen Isilawuli Swab
I-Antigen Swab Test Kit
ICovid-19 Antigen -Saliva Cup
I-Covid-19 Antigen -Saliva Swab
I-Fia Rsv / i-Adv Antigen
Ukuhlolwa Okusheshayo Kwe-Flu & Covid-19 Antigen Duo
I-Norovirus Antigen Rapid Test Kit
Ingculazi Yokuphefumula Ye-Antigen Rapid Diagnostic Test Kit
I-Rota / Adeno Antigen Rapid Test Kit
I-Swab Antigen Kit
IKaiBiLi COVID-19 Antigen - inkomishi yamathe
I-KaiBiLi COVID-19 Antigen (Isivivinyo Esisodwa)
IKaiBiLi COVID-19 Antigen -saliva swab